Ajụjụ - Liaocheng Jiujiujiayi Fuel Injection Co., Ltd.
Ihe Ntinye Diesel
Inye ihe Bosch
Ihe Nkuku Nobi
Ihe nchịkọta Noumm
Katapila Injector Valve
Cummins Injector valvụ
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị asaa. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị nwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndị ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ na usoro iheomume gị, biko jiri ire gị na-ere ihe ị chọrọ. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime ya.
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Express na-abụkarị ndị kacha ọsọ ọsọ mana ọ kachasị ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Gharịrị ọnụ ahịa enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa ego, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.
Ngwongwo ngwongwo ndị German & USA kwadoro
Right Copyright - jiujiujiayi: All Rights echekwabara.